Lammiin Britaaniyaa tokko Baahirdaar keessatti ajjeefamuun gabaafame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Lammiin Britaaniyaa tokko Baahirdaar keessatti ajjeefamuun gabaafame
Lammiin Britaaniyaa tokko Baahirdaar keessatti ajjeefamuun gabaafame
Lammiin Britaaniyaa, umriin 47, magaalaa Baahirdaar keessatti ajjeefame. Lammiin Britaaniyaa kuni turistii yoo ta’u, kan ajjeefame guyyaa kaleessaa bataskaana tokko keessatti. Du’a isaatiif sababa kan ta’e qawween harka hidhataa tokkootii baaraquu isaati, akka dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa ob.Shimallis Kamaali jedhanitti.
Balaan kuni kan uumame yeroo jiraataan magaalaa Baahirdaar tokko qawwee isaa ceekuu tokko iraa gara kan biraatti jijjiiru qawween dogoggoraan harkaa dhuka’e. Jiraataan kuni nama hayyama qawwee qabu ture, akka ibsa ob.Shimallisitti. Qawween kuni moofaa ta’uu bira dabree, namichi qawwee baadhate qawween kuni rasaasa qabaachu isaa quba hinqabu ture, akka ibsa dubbi himaan biyyattiitti.
Namichi ajjeechaa lamii Briitaaniyaa kaanf sababa ta’e yeroo ammaatti qabamee qorannaan kan irratti geggeffamaa jiru ta’uu isaas ob.Shimallis beeksisaniiru.
Reeffi namicha du’ees qorannoof gara Finfineetti geffamuun isaas beekameera.
Embaasiin Britaaniyaa Guddittii lammiin isaanii ajjeefamuu beksisee, maatii isatiifis gargaarsa qonsulaa laataa jiraachuu addeesseera.
Previous articleMaxxansaan Afaan agarsiisa kitaabaa magaalota heddu keessatti geggeessuuf
Next articleArsenaal injifate. Cheelsiifi Manchastar lamaan morkattoota isaanii woliin qabxii qooddatan